Masuuliyiin Ka Tirsan Xukuumadda DDS Oo Looga Shakiyey Xanuunka Covid-19 Oo Diiday In Karantiil La Geliyo Iyo Xafiiska Caafimaadka Oo War Kasoo Saaray - Jigjiga Online
HomeSomalidaMasuuliyiin Ka Tirsan Xukuumadda DDS Oo Looga Shakiyey Xanuunka Covid-19 Oo Diiday In Karantiil La Geliyo Iyo Xafiiska Caafimaadka Oo War Kasoo Saaray
Masuuliyiin Ka Tirsan Xukuumadda DDS Oo Looga Shakiyey Xanuunka Covid-19 Oo Diiday In Karantiil La Geliyo Iyo Xafiiska Caafimaadka Oo War Kasoo Saaray
Jigjiga (JO) – Masuuliyiin ka tirsan xukuumadda Dawladda Deegaanka Soomaalida oo looga shakisan yahay caabuqa Covid-19 ayaa la sheegay inay diideen inay galaan karantiil.
Masuuliyiintan oo isugu jira Wasiirro, Maareyayaal iyo guddi fulin ayaa xidhiidh dhow la lahaa Wasiir ku-xigeenka Xafiiska Adeegga Shacabka iyo Cudduda Shaqaalaha oo saddex maalmood ka hor qirtay inuu hayo xanuunkani.
Ma jiro war rasmi ah oo kasoo baxay xukuumadda oo lagu shaaciyey magacyada masuuliyiinta laga shakisan yahay, hase yeeshee ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Jigjiga Online u xaqiijiyey in Xafiiska Caafimaadka ee deegaanka uu ku wargeliyey tiro wasiirro, maareeyeyaal iyo guddi fulin iskugu jirta oo ay iska ag-dhowaayeen wasiir ku-xigeenka xanuunka laga helay inay is-go’doomiyaan oo aanay dadka soo dhex-gelin.
Sida lagu sheegay qoraal uu xafiiska Caafimaadku soo saaray, waxay kooxaha sirdoonka iyo dabo-galka ee caafimaadku soo ogaadeen 23 qof oo isugu jira Masuuliyiinta Dawladda, Hay’adaha iyo Ganacsato caan ah oo la tuhunsan yahay.
Shan ka mid ah masuuliyiintan oo xafiiska Caafimaadku amray inay guryahooda isku karantiilaan, ayaa la sheegay inay si cad u diideen inay u hoggaansamaan awaamiirta xakamaynta caabuqa, waxaanay sidii caadiga ahayd u tageen xafiisyadooda Isniintii maanta iyagoo shacabka iyo shaqaalahaba si caadi ah ula kulmayay.
Masuuliyiintan oo kala ah: Maxamed Shaale Isaaq oo ahaa Madaxii Xarunta Dhexe ee Xisbiga iyo Guddi Fulin, Wasiir Cabdiraxmaan Axmed (Hurre), Wasiir Cumar-Faaruuq Warfaa, Wasiir Cabdiqaadir Rashiid Ducaale iyo Maareeye Jamaal Fidaar oo Waaxda Sirdoonka ee Xafiiska Caafimaadku soo ogaaday ayaa diiday inay karantiil galaan.
Warku wuxuu sheegay in shantan masuulba ay maanta joogeen xafiisyadooda, ayna sidii caadiga ahayd ula kulmeen shaqaalaha iyo shacabka kale ee ay shaqooyinka u hayeen, halka ay markii dambena suuqa u dhaadhaceen oo ay macaamil la sameeyeen dad shacab ah.
Masuuliyiinta diiday inay karantiilka galaan
Qoraalka uu xafiiska caafimaadku ku baahiyey bartiisa Facebook oo u muuqday in si toos ah loogula hadlayo Masuuliyiintan, ayaa lagu yidhi: “Sharcigu makala saar-saaro muwaadiniinta ee si siman ayuu u qabtaa. Kanina wuuba kasii xagjiraa oo waaba naf bad-baadin (Naftaada, ta qoyskaaga, qaraabadaada, ehelkaaga iyo bulshadaadaba).
Ilaa hada waxay kooxaha sirdoonka caafimaadku (Surveillance teams) baadigoob koodii kusoo ogaadeen ama kusoo heleen ilaa 23 isugu jirta masuuliyiin dawladeed, kuwo hay’adeed iyo ganacsato caan ah oo dhamaantood gooni loo soocay. Dhamaan xaaladooda caafimaad way fiicantahay, laakiin taxadar ahaan ayaa gooni loogu karantiilay.
Ugu dambayn wuxuu xafiisku ugu baaqayaa dhamaan masuuliyiinta heerarkooda kaladuduwan iyo bulshada qaybeheeda kaladuduwanba inay ogaadaan in sharcigu si iskumida uwada qabanayo. Sidaas darteedna loogawada baahanyahay inay u hogaansamaan awaamiirta xirfadlayaasha caafimaadku siinayaan.
#Joogtee inaad kufaraxalato biyo iyo saabuun.
#Kalafogaanshaha aan ilaalino.
#Suuq ubixida aan muhiimka ahayn aan kabaaqsano.
#Marka aad dibada ubaxayso isticmaal Gafuur-daboolka.
#Uhogaansan awaamiirta bahda caafimaadku bixinayaan.
#ilaahayna aan talasaarano.”
Dhinaca kale, Wasiir ku-xigeenka Xafiiska Adeegga Shacabka Iyo Horumarinta Cudduda Shaqaalaha DDS, Maxamed Muuse oo laga helay Xunuunka #COVID19 ayaa sheegay inuu hayo liis dad ah oo ay ku xusan yihiin magacyada shaqsiyaadkii ay kulmayeen muddadii uu xanuunku kusoo jiray ee ahayd ka hor intii aan sida rasmiga ah looga helin.
Wasiir ku-xigeenka ayaa qoraal uu bartiisa Facebook ku baahiyey ku sheegay in liiskiisa ay cid walba ku jirto, taas oo ujeeddadeedu tahay inay masuuliyiin iyo shacaba ku jiraan, waxaanu codsaday in dadkaasi ay isasoo baadhaan oo ay is-shaaciyaan.
Wasiir ku-xigeenku waxa uu ku hanjabay inuu shaacin doono magacyada dadkaas haddii ay iyagu isa sheegi waayaa, waxaanu qoraalkiisa ku yidhi: “Bariido wanaagsan.
Jabhada ONLF xubnihii iska soo dhiiba ama la soo qabto waxaa lagu qasbijiray inay qoraan xubaha lashaqaynjiray gaar ahaan xubnaha qarsoon ee wadanka jooga oo loo yaqaanay liiska shuftada.
Hada waxaan qoray liis aan kadhicin oo cidwalba leh. Malahayga waxaa la odhan liiska shuftada cronaha. Hadii aad iska dhexwaydo isoo wac aan kugu daree fadlan wa ixsaanig.
Dadku sas ayay ka qabaan cudurkan. Raga qaar ayaa hooska xamilila’aa shalay jiif iyo joogna ay udiiday. Ragaas waxay kudoodayeen inaanaan is aragba xaqna uleeyihiin in laga reebo liiskan, ergadu igu badatay. Waxaa la iisheegay shaaha sinjibiisha iyo malabka lehna raga qaar inay dhawr koob fadhi kuwada cabeen.
Tiraba laba sxbada ka mid ahaa ayaa iskood u codsaday inay is baadhaan. Dhamaantiin waan idin qoray waxba hay calaacalin.”
Si kastaba ha ahaatee, waxa la isweydiinayaa sababta in masuuliyiintani ay diidaan inay is-karantiilaan si aanay shacabkooda nafahooda halis u gelin iyo tallaabada uu Madaxweynuhu ka qaadi doono.
Joe Biden Oo Qoyska Ninkii Madoobaa Ee Maraykanka Lagu Dilay Ee George Floyd
Sucuudiga Oo Qorshaynaya Tallaabo Dhibaato Ku Ah Xujaajta Sannadkan